Iimveliso eziphambili -I Yangzhou qiangjing mpahla yemidlalo Co, Ltd.
Inkxaso ye-elastiki kunye nokuphefumla inika ukhuseleko ngokubanzi kunye nonyango lweentlungu ezinqeni ezibangelwa kukuqina kwemisipha ye-lumbar kunye nokuwohloka kwe-lumbar. Olu hlobo lwenkxaso esinqeni lukhululekile kwaye lusondele kakhulu emzimbeni. Ewe, unokusebenzisa inkxaso esinqeni esinqeni ukukhusela ngcono umqolo we-lumbar. Kwaye ukunciphisa umzimba, ukubila kwesinqe esincinci esincinci kukhetho olufanelekileyo. Ukukunceda ukujuluka ngexesha elifutshane kunye nokutya ngakumbi iikhalori. Kukho nonyango lwe-magnetic, i-infrared kunye nolunye unyango lwe-physiotherapy.
I-brace yamadolo inemisebenzi emithathu ephambili: ukubamba, ukugcina ubushushu, kunye nokukhathalela impilo.
Idolo elidibanisa njengedolo ukusabalalisa ubunzima. Ukuzivocavoca kunika uxinzelelo olukhulu edolweni, elinokubangela isifo edolweni. Nge-brace edolo, i-patella inokulungiswa kwindawo ezinzileyo yokuqinisekisa ukuba akukho lula ukwenzakala. Ukuba idolo elidibeneyo alimala, ukusetyenziswa kweendlela ezixineneyo zedolo kunokucutha ukuguquguqulwa kwamadolo kwaye kunciphise ukuguquguquka kwedolo, ngaloo ndlela kukhusele idolo elidibeneyo ekuqhubekeni kobukhali.
Amalungu ajongana nobuthathaka ebusika. Ungasebenzisa iipads zedolo ukugcina amadolo akho efudumele kwaye uqinisekise ukuhamba kwegazi okuqhelekileyo emadolweni. Abantu abadala banxiba kubo ebusika ukukhusela amadolo abo kwisifo samathambo. Ukubambelela kwexesha elide ukunxiba kunokuthintela i-rheumatism. Isebe lokugula
Kwezemidlalo, ngenxa yendlela eyahlukeneyo yokuma, kulula ukubangela ukulimala okanye iintlobo ezithile
Amadolo edolo. Iipads zamadolo zifanelana namadolo okuqinisa amadolo ngexesha lokuzilolonga kunye nokunciphisa iintlungu zamadolo. Iipads zamadolo esivelisayo zinokusasaza ngempumelelo uxinzelelo Uxinzelelo edolweni kunciphisa ukubakho kwezemidlalo ezenzakalweni.
Indawo yokulungisa imeko
Siza ukutshisa amanqatha, ukuzivocavoca imizuzu eli-10, ukujuluka kangangesiqingatha seyure, ukuphucula ukusebenza kakuhle kwamafutha, ukuzilolonga ngokukhawuleza ukuya esinqeni esincinci.
Sebenzisa irabha ye-neoprene ukwenza ngaphakathi, unxibe emva koko umzimba unokuqokelela ubushushu esinqeni ngokufanelekileyo, kodwa ungabambeki.
Ukubuyisela kwakhona ukuqina kwendalo komzimba, ukuphazamisa uxinzelelo lomgogodla, ukunciphisa ukukhathala, kunokukhusela ngokufanelekileyo intamo kunye nomlenze, kwaye kungafezekisa isiphumo sokubeka igrisi kunye nokubumba ngokulula.
I-brace ye-wrist inefuthe elibonakalayo ekunciphiseni ukudumba, ukukhusela inxenye eyenzakeleyo, kunye nokuvumela ukuba indawo eyenzakeleyo iphinde yenzeke. Kwangelo xesha, i-brace ye-wrist inganciphisa impembelelo yesandla xa udlala imidlalo. Abadlali abanamandla asezantsi bahlala bekhetha izixhobo ezithile zokukhusela. Ukunciphisa ifuthe le-racket esandleni nakwengalo, i-racket inganxitywa ngentambo ethambileyo kwaye yongeze ukungcangcazela. Ikhusela ukungahambelani kakuhle kwamalungu esosi kunye nokukhuthaza ukuhamba kwegazi. Ukunxiba iwatchband kunokukhulula ngokufanelekileyo uxinzelelo kwisandla kunye namandla amakhulu empembelelo yokuphepha ukwenzakala kwesandla. Inomsebenzi wokuthintela uxinzelelo kunye nokusasazeka
Ukuphucula isikhundla esingalunganga, Umsebenzi we-Sedentary, ii-sprains ezidibeneyo, ukhuseleko lomzimba lwe-GYM